Mask Campaign ပြုလုပ်ရာ၌ လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ရှမ်းစီမံ/ဘဏ္ဍာဝန်ကြီး တောင်းပန် - Kanbawza Tai News
Home တောင်ကြီး ရှမ်းတောင်သတင်းများ အစိုးရအဖွဲ့ Mask Campaign ပြုလုပ်ရာ၌ လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ရှမ်းစီမံ/ဘဏ္ဍာဝန်ကြီး တောင်းပန်
Mask Campaign ပြုလုပ်ရာ၌ လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ရှမ်းစီမံ/ဘဏ္ဍာဝန်ကြီး တောင်းပန်
May 07, 2020 တောင်ကြီး, ရှမ်းတောင်သတင်းများ, အစိုးရအဖွဲ့,
ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် Mask Campign ပြုလုပ်ရာ၌ လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်တောင်းပန်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ဒီက​နေ့​တောင်ကြီးမြို့၊ အ​ဝေရာမီးပုံးပျံကွင်းမုခ်ဦးအဝမှာ Mask Campaign ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အချိန်မှာလူစုလူ​ဝေးပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Mask Campaign လုပ်တဲ့အချိန်မှာ​တော့ လှုပ်ရှားသူ​တွေသည် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ​နေပြီး ပြန်လည်လုပ်​ဆောင်ကြတာကို​တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပရာမှာ social distancing ကိုချိုး​ဖောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ​ကြောင့်လည်း ရှမ်းအစိုးရ Mask Campaign လှုပ်ရှားမှုသည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Social Distancing ကိုချိုး​ဖောက်တယ်လို့ လှုမှုကွန်ယက်​ပေါ်တွင်​ဝေဖန်မှုများစွာထွက်​ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ အဲ့ဒီ​လိုဝေဖန်မှုများကိုလည်း ​လေးစားစွာလက်ခံယူသည့်အတွက်​လည်း​လေးစားစွာ​တောင်းပန်အပ်ပါသည်” ဟု ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးအား ကမ္ဘောဇတိုင်းမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် “လူမှုကွန်ရက်ကနေ တောင်းပန်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် တောင်ကြီးအပြင် ရှမ်းရှေ့၊ ရှမ်းမြောက်မှာလည်း လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကျရင် စနစ်တကျဆွဲပြီး ပြောပါမယ်” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ ယာယီဈေးများတွင် ယနေ့ မေလ ၇ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ဦးဆာင်၍ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းကာ Mask Campign ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Mask Shan Campaign ကို မြို့တော်တောင်ကြီး အပါအဝင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ မြို့ပေါင်း ၂၁ မြို့အပြင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတွင်လည်း Mask Shan Campaign ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Tags # တောင်ကြီး # ရှမ်းတောင်သတင်းများ # အစိုးရအဖွဲ့
Tags တောင်ကြီး, ရှမ်းတောင်သတင်းများ, အစိုးရအဖွဲ့
မင္းေဇာ္မင္း . အဦးဆံုး၀န္ခံလိုသည္မွာ မိမိသည္သတင္းသမားတစ္ဦးသာျဖစ္ၿပီးေဆးပညာႏွင့္ပတ္သက္သူတစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္တစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင...
ကုမၸဏီမ်ား၏ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တာ၀န္ခံမႈ
ထမံသီ . အက်ိဳးအျမတ္ေတြရရွိဖို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚမွာ ဘာေတြကို...
ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ပါတီ၏ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဖဲြ႕စည္းသြားမည္
စိုင္းရာဇာ၊ ကေမၻာဇတိုင္း . ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD)၏ ျပန္ၾကား ေရးေကာ္မတီကို ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္း တြင္ အၿ...
တောင်ကြီးမြို့ ရုရှားကန်တွင် အမျိုးသား တစ်ဦးရေနစ်သေဆုံး
စုလှိုင် . ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူရပ်ကွက် အတွင်းရှိ ရုရှားကန် (ထီသိမ်ကန်)တွင် ယနေ့ မေလ ၁၁ ရက် ညနေပိုင်းက အမ...